Learning Drupal for Begineer - MYSTERY ZILLION
Learning Drupal for Begineer
January 2015 edited January 2015 in Programming
ဆရာတို့ရေ ... Drupal လေ့လာချင်လို့ Google မှာရှာကြည့်တော့လဲ နားမလည်ဘူး Drupal ဆိုတာဘာမှန်းကိုမသိသေးတာ.... E-book / Tutorials တွေလဲ ဒေါင်းချင်။ ဘယ်လို Install လုပ်မလဲ ? ဘယ်လိုသုံးရလဲ Step by Sep Video တွေဘယ်မှာလေ့လာလို့ရလဲ ? Youtube မှာရှာကြည့်တာ ဟိုတပိုင်းဒီတပိုင်းတွေပဲတွေ့တယ်။ Drupal Website မှာရေးထားတာလဲ သိပ်ပြီးနားမလည်ဘူး။ ဘယ်ကနေဘယ်လိုစလုပ်ရမလဲ ?
Wordpress and joomla ကို အရင်စမ်းကြည့်ရင် လွယ်သွားမယ်ထင်ပါတယ်။ CMS စမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင် ဘယ် Content တွေကို Data အဖြစ်လုပ်ချင်တာလည်း အရင်စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ရှာကြည့်ပါ။ ဥပမာ။ သတင်း ဆိုက်လား။ အွန်လိုင်း ရှော့ပင်းဆိုက်လား။ စသည်ဖြင့်။ .....
January 2015 Administrators
အခု လက်ရှိ က drupal7မကြာခင် 8 လာတော့မယ်။ ဒါကြောင့် စာအုပ်တွေက နည်းနည်း နောက်ကျလိမ့်မယ်။ စာအုပ်ထက် tutorial တွေကို ရှာပြီး စမ်းကြည့်ပါ။
https://groups.drupal.org/myanmar မှာ မေးရင်တော့ အကောင်းဆုံးပဲဗျာ။ drupal မြန်မာ အဖွဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ facebook မှာလည်း drupal myanmar အဖွဲ့ရှိတယ်။ https://www.facebook.com/DrupalMyanmar ကို မေးလည်း ရတယ်။